After - Amazon Prime | တွင်ကြည့်ရှုရမည့်ရုပ်ရှင်များ Bezzia
ပြီးနောက်- Amazon Prime တွင် ကြည့်ရှုရမည့် ရုပ်ရှင်များ
Susana godoy | 11/01/2022 14:00 | လက်ဆောင်
သူတို့က မင်းနဲ့မရင်းနှီးသေးရင် ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတဲ့ sagas တွေထဲက တစ်ခုကို ခံစားဖို့ နေရာရှာလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည် 'After' ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၎င်းသည် စာရေးဆရာ Anna Todd ၏ ဝတ္ထုကို အခြေခံထားသော ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။. လူငယ်ဆက်ဆံရေး၊ ပထမဆုံးစိတ်ပျက်စရာများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုပြဿနာများသည် ဤကဲ့သို့သောဇာတ်လမ်းတွင် ထိမိသောရွေးချယ်မှုအချို့ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်အထိ ရုပ်ရှင်တစ်ကားစီသည် Todd ၏ စာအုပ်များထဲမှ တစ်ခုကို အခြေခံထားသည်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကားထဲက ဇာတ်ကားသုံးကား ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိပါတယ်။. မင်းကို စွဲလန်းစေမယ့် ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးအကြောင်း နည်းနည်းထပ်သိချင်ရင် အဲဒါက မင်းကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက် နောက်မှာပါတဲ့ အရာအားလုံးကို လက်လွတ်မခံနိုင်ဘူး။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ဒါမှမဟုတ် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
1 ပြီးနောက်- အရာအားလုံး ဤနေရာတွင် စတင်သည်။
2 ပြီးနောက်: တစ်ထောင်ကျပ်
3 ပြီးနောက်: ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ
ပြီးနောက်- အရာအားလုံး ဤနေရာတွင် စတင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ယခုအချိန်အထိ Amazon Prime တွင် သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ရုပ်ရှင်သုံးကားရှိပါသည်။ ပထမဆုံး ခေါင်းစဉ်က 'After: အရာအားလုံး ဒီနေရာကနေ စမယ်'. အဲဒီထဲမှာ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ အချစ်ရေးမှာ ပြောစရာတွေ အများကြီး ရှိတာကို တွေ့ရှိရတယ်။ ကောလိပ်စတက်တော့ သူ့အိမ်ကပြောင်းလာတဲ့ Tessa Young နဲ့တွေ့မယ်။ သူ့အမေက မကြိုက်ပေမယ့် သူ့ကို ဂရုမစိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ ဖွဲ့မယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ သူ့ဘ၀မှာ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊၊ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကို ဆုပ်ကိုင်ထားပုံရပြီး၊ တတိယလူက တစ်ညမှာ သူတို့လုပ်ထားတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုပေါ် မူတည်ပြီး အရာအားလုံးက သူ့မျက်လုံးတွေကို ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ လုံးဝမမှန်ကန်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Tessa သည် အလွန်ပြောင်းလဲသွားစေသည်။ သူမနှင့် Hardin သည် တူညီမှုများစွာရှိသော်လည်း မျှဝေရန်ကျန်နေသေးပုံရသည်။ ဒါကြောင့် ပထမအပိုင်းမှာ သူတို့တွေ့ဆုံပုံ၊ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာသလဲ၊ ပထမဆုံးစိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့ မိသားစုပြဿနာတွေကိုလည်း ပြသထားပါတယ်။
ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ဇာတ်လမ်းအသစ်များလည်း ပြောင်းလဲလာသည်။ ယခု Tessa သည် သူမ အမှန်တကယ် လိုချင်သည် နှင့် လိုအပ်သည် ဖြစ်သောကြောင့် လေ့လာမှုများကို အာရုံစိုက်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ သူမသည် အလုပ်သင်တစ်ဦးအဖြစ်လည်း အလုပ်ရထားသောကြောင့် ၎င်းသည် သူမ၏အနာဂတ်အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သူမသည် မည်သည့်အရာကိုမှ လမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်စေချင်ပေ။ အမြဲတမ်း ရိုးစင်းနေပေမယ့် ကြိုက်သလောက် မရိုးရှင်းပါဘူး။ အကြောင်းမှာ သူမ၏အလုပ်တွင်၊ Hardin လိုလူမဟုတ်ဘဲ သူမအနားတွင် လိုအပ်မည့်ဗားရှင်းဖြစ်သည်ကို သူမသိသောကြောင့် သူမကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော လက်တွဲဖော်တစ်ဦးလည်း ရှိသည်။ ဒါက အဆိုးဆုံးမျက်နှာကို ထပ်ပြီးပြသနေပုံရပြီး အဲဒါက မင်းမှာ သေချာတဲ့ပြဿနာတွေကို ကျော်လွှားပြီးပြီလို့ ထင်ထားတဲ့အခါ သူတို့က မင်းရှေ့မှာ ပြန်ပေါ်လာတာဘဲ။ ဒါပေမယ့် မင်းအချစ်ကို မတိုက်နိုင်ဘူး ဒါမှမဟုတ် မင်းလုပ်နိုင်တာတော့ မှန်တယ်။ Amazon Prime တွင်လည်း သင်ကြည့်ရှုနိုင်သော ဝတ္ထုထဲမှ ဒုတိယဇာတ်ကား ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော သုံးသပ်ချက်မရရှိခဲ့သော်လည်း လူအများက အခြားထင်မြင်ယူဆချက်တစ်ခုရှိပုံရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တတိယမြောက်ရုပ်ရှင်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယခုအချိန်အထိ ၎င်းသည် Amazon Prime တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်သည်။. ဒီဟာကို 2021 မှာထွက်ရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် စတုတ္ထအပိုင်းရောက်ဖို့ နည်းနည်းစောင့်ရပါလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးကြား အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး ဆက်ဆံရေးဟာ ခိုင်ခံ့မှုကနေ အားကောင်းလာပုံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုအနေနဲ့ ခိုင်မာလာတဲ့အခါ မိဘနဲ့ မိသားစုက သူတို့ အသီးသီး ပါဝင်လာကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ဘဝနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်များ ထပ်မံမြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ရုပ်ရှင်တစ်လျှောက်တွင် လျှို့ဝှက်ချက်များများစွာရှိနေသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ခံစားချက်များကိုပင် သံသယဝင်မိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သူတို့သဘောပေါက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ လှည့်ပတ်ဖို့ သမိုင်းတွေ အများကြီးရှိလို့ သင်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတာက အမြဲတမ်း ပိုကောင်းပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လက်ဆောင် » ပြီးနောက်- Amazon Prime တွင် ကြည့်ရှုရမည့် ရုပ်ရှင်များ